SimpleTexting: Otu SMS na Text Izi ozi Platform | Martech Zone
Na-anabata gị ederede ederede site na ika ị nyere ikikere ka ị bụrụ otu n'ime usoro ịre ahịa azụmaahịa na-aga n'ihu ma ị nwere ike mejuputa. Ederede Ozi ederede Ndị azụmaahịa na-eji ya taa:
Mbuli Ahịa - Zipu nkwalite, ego, na onyinye ole na ole iji bulie ego
Nwee mmekọrịta - Nye ọrụ ndị ahịa na nkwado na mkparịta ụka ụzọ 2
Tinye ndị Na-ege Gị Ntị - Jiri ngwa ngwa kesaa mmelite dị mkpa na ọdịnaya ọhụrụ
Mepụta Obi .tọ - Nabata ntuli aka ederede iji merie ma ọ bụ ntuli aka ntuli aka
Anakọta-eduga - Nye ndị ahịa nwere ike ịdebanye aha maka ederede ma ọ bụ zipu ajụjụ otu
Nurture na-eduga - Soro ụzọ na-eduga ma mee ka ha tinye aka na ederede oge ụfọdụ
Ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-elele email anyị ma ọ bụ ozi ndị ọzọ, mana enwere obere obi abụọ otu anyị si aza ozi ederede.
98% nke ederede ederede meghere, njikọ na-enweta nkezi CTR nke 17, na nkezi ntụgharị ntụgharị SMS bụ ihe dịka 45%!
SimpleTexting SMS Mgbanwe Ọnụego
Ihe omumu mgbe omumu ihe na-enye ihe akaebe nke odi ire nke ozi ederede ederede. Ọ bụ ezie na ịnweta nọmba ekwentị nnata nwere ike ịbụ obere ihe ịma aka karịa email, enweghị obi abụọ banyere ụba njikọ.
39.5% nke ndị ahụ nyochara kwuru na ahịa SMS nyere ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ọnụ ahịa email.
Akuko Azụmaahịa SMS nke SimpleTexting
Ọ bụrụ na ịmaghị nkọwa okwu na teknụzụ na-ezigara ozi ederede, anyị edeela nkọwa SMS ebe a yana ngwa okwu jikọtara ya na teknụzụ.
Isi na ahịa SMS bụ ikike. Ọ bụ ezie na ọwa ndị ọzọ nwere ụfọdụ usoro iwu chọrọ maka ịbanye ma ọ bụ pụọ na mkpọsa, ịkwanye ozi na nọmba ekwentị mkpanaaka chọrọ iwu chọrọ maka kwupụtara nkwenye site na onye debanyere aha.
Onye debanyere aha kwesịrị ibido arịrịọ ịchọrọ, nke nwere ike ime site na ntinye aka (ederede MARKETING na 71813), site na bọtịnụ pịa-na-ederede na ngwongwo dijitalụ, ụdị ntanetị, ahịa email (nke nwere ike ịnwe ịpị-ederede) ma ọ bụ pịa na ụdị weebụ), Facebook Lead Gen Ads, Text-to-Vote or Text-to-Win Contest, ma ọ bụ ọbụna ndenye ọpụpụ POS.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ebu ụgbọelu na-achọkarị nkwupụta nzuzo nzuzo akọwapụtara nke ọma ma nwee nkọwa akọwapụtara nke ọma. Akụkụ bụ isi nke ịrụ ọrụ na usoro mgbasa ozi SMS na-agbaso ụkpụrụ ndị ahụ na usoro ikpo okwu.
Kedu ka ahịa SMS si pụọ iche?
Ozi ederede dịtụ iche site n'echiche nkwukọrịta ahịa:
Short - SMS bụ acronym maka Short Ozi System. Agwa ịgba maka otu ozi bu Ihe odide 160. Imirikiti ekwentị na netwọkụ nke oge a na-akwado nkwekọrịta ka ha wee nwee ike kewaa ma wughachi ozi ruo ihe odide 1600. Ejikọtara ya na nha ihu, ozi ederede dị iche na usoro ozi ndị ọzọ. N'ezie, MMS, nyere ikike izipu foto, gifs animated na vidiyo (yana oke oke).
Oge oge - Eziokwu bụ na a na-eziga ozi ederede ozugbo na ekwentị mkpanaaka… dịka aka gị ma ọ bụ dị ezigbo nso. Mgbe ọ bịara n’oge, nke ahụ bụ ihe dị mkpa na usoro izi ozi ederede gị. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ị ga-achụbanye aka na mmata na oge pere mpe, ekwentị ka mma. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ị gaghị elele email ruo ọtụtụ awa ma ọ bụ ụbọchị ụfọdụ ma e jiri ya tụnyere ozi ederede.
Ọnọdụ - Ọ bụ ezie na izipu ozi ederede anaghị adabere na ọnọdụ nke ngwaọrụ ahụ, azụmaahịa mpaghara nwere ike ịiche onwe ya site na ekwentị. Ọmụmaatụ, pushing a discount maka retail tinyekwa nwere ike ụgbọala ozugbo okporo ụzọ ma ọ bụ a review arịrịọ dị ka a home service person is leaving a job site. N'ezie, azụmahịa gị nwere ike iji mpaghara ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ na-enweghị ego. Nwere ike ịgbazite koodu dị mkpirikpi raara onwe ya nye.
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ikpo okwu Izi ozi ederede na-arụ ọrụ nke ọma, SimpleTexting na-eduga ụlọ ọrụ ahụ ike na njikọta, gụnyere:
Zipu mkpọsa SMS na MMS - Zipu ozi ederede na otu kọntaktị. Gụnye foto, hazie ederede gị, ma soro ndị pịa njikọ gị.
Nwee Mkparịta ụka Wayzọ Abụọ - Ederede na ezigbo ndị ahịa. Nweta nọmba ọhụrụ ma ọ bụ ederede-mee ka nke gị dị ugbu a. (Na-enweghị emetụta ọrụ olu gị.)
Rụpụta Ndepụta ma ọ bụ Bubata nke Gị - Tinye kọntaktị ndị dị ugbu a ma jiri atụmatụ dịka ederede-maka-ozi iji nakọta nọmba ekwentị ngwa ngwa.
SimpleTexting Key Atụmatụ
Koodu nkpirisi - Debe otu ụlọ ọrụ anyị akọwapụtara nke nwere mkpụrụ ọnụọgụ SMS dị mkpirikpi maka azụmahịa gị ma ọ bụ nzukọ gị. Ha di mfe icheta ma ha di nma maka okwu di elu.
2-Way Izi ozi - Meziwanye afọ ojuju ndị ahịa, dozie mkparịta ụka, yana mmekọrịta dị nso na izipu ozi 2-ụzọ. Jiri nọmba gị dị ugbu a ma ọ bụ nweta nke ọhụrụ!
Ederede edepụtara - Nịm ụbọchị na oge maka ederede gị. Dezie ozi ọtụtụ awa, ụbọchị, ma ọ bụ ọnwa tupu oge wee nọrọ ọdụ, zuru ike. Anyị ga-eme ndị ọzọ.
Ndị na-ede akwụkwọ - Mee ka ndị na-ege gị ntị tinye aka n’usoro ederede dị iche iche na-akpaghị aka karịa ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnwa. Zuru oke maka ịmepụta mkpọsa ntapu.
Bubata Ndi ana-akpo - Nweela ndepụta? Mfe bubata kọntaktị gị na sekọnd. Gụnye mpaghara ndị ọzọ dịka Email, Aha, na ndetu iji jiri ozi nke ahaziri iche.
Otutu-Number - Tinye otutu nọmba ekwentị na otu akaụntụ. Gbaa mbọ hụ na ozi ziri ezi ruru ngalaba aka nri gị, onye ọrụ ya, ma ọ bụ ebe ị nọ site n’inye onye ọ bụla akara nke ya.
Ekwentị mkpanaaka na - Banye na atụmatụ anyị niile dị ike, ọbụlagodi mgbe ị na-aga njem. Ngwa iOS na gam akporo anyị na-ahapụ gị ijikwa mkpọsa gị site na ebe ọ bụla.
SMS Keywords - Otu n'ime ụzọ kachasị mfe ma dị mfe iji nakọta nọmba ekwentị ma tolite ndepụta aha gị bụ ịmepụta ma kwalite isiokwu SMS.
Gbasaa ozi - Ọtụtụ nyiwe na-amachi gị ederede nke naanị mkpụrụedemede 160 ogologo. Anyị na-enye gị ihe odide 304 ka ị nwee ike izipu ozi ka mma, nkọwa zuru ezu.
MMS Ahịa - MMS na-ahapụ gị ịkwalite mkpọsa ozi ederede gị na Kupọns, ihe oyiyi ngwaahịa na mgbasa ozi ndị ọzọ bara ọgaranya. Ga - enweta mkpụrụedemede 1,600 nke ederede, kwa.
Mgbakwunye Foto - Onye kwuru na ederede bụ naanị mkpụrụedemede 160? Ihe osise a bara uru 1,000. Jiri ederede mara mma ma ọ bụ Kupọns na-adọrọ adọrọ walite ederede gị.
Ubi Omenala - Jikwaa data gị ma zipụ mkpọsa ederede ahaziri iche. Ngwa anyị gụnyere ubi ndabara ole na ole, mana ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ịchọrọ.
data Collection - Chọrọ ịmatakwu banyere ndị debanyere aha gị? Ihe ị ga - eme bụ ịjụ. Anyị ga-echekwa data gị na Ubi Omenala maka ojiji na mgbasa ozi n'ọdịnihu.
agba - Akụkụ na-eme ka ọ dị mfe itinye ndị na-ege ntị na-elekwasị anya na atụmatụ ahịa ederede gị. Bido iziga amamịghe, ihe ndị ọzọ dị mkpa taa!
Njikọ Ndepụta - Hụ otu esi ejikọ njikọ gị dị mkpụmkpụ site na iji nchịkọta dị elu anyị. Sochie nsonaazụ ma tụọ ọganiihu maka mkpọsa ọ bụla.
Ndị nwụrụ anwụ - Njirimara ndị ọrụ SimpleTexting abụghị naanị ị na - enye gị ohere itinye ndị ọrụ ọzọ na listi gị, mana ọ na - enye gị nhọrọ ịkenye onye ọrụ ọhụụ ọhụụ nọmba ekwentị ha.
Wepu Ozi - SimpleTexting si pụọ ozi atụmatụ na-ahapụ gị ịtọlite ​​akpaghị aka ozi na-aza kọntaktị mgbe ị na-apụ n'ọfịs ma ọ bụ n'oge a preset window.
Ndebiri na oyiri - Chekwaa oge site na iji ozi ị na-ezigara ugboro ugboro, mkpọsa, nzaghachi igbe, autoresponders, na ozi nkwenye isiokwu.
achụ - Laghachi ndị ahịa azụ ọsọ ọsọ. Site na ịkpalite, ịnwere ike ịza azịza ajụjụ na arịrịọ maka ozi gbasara akpaghị aka.
Hụ Nsonaazụ Gị - Jiri anya nke uche gị hụ ndị debanyere aha gị, ozi gị, na mkpụrụ okwu okwu gị na eserese mara mma, grid na eserese. Ikwesiri ịhụ ya iji kwere ya.
Ederede iji merie - A kpochapụwo ahịa tactic na a oge a ighikota, SMS sweepstakes ndị dị mfe ịbanye na mfe melite. Na mgbakwunye, ha bụ ụzọ dị mma iji tinye ndị debanyere aha.
Ederede gaa nyocha - Nweta nzaghachi ngwa ngwa sitere n'aka ndị ahịa nwere nyocha ederede. Mepụta otutu nhọrọ na ọbụlagodi nsonaazụ oge na ndị sonyere gị.
Ndị na-edebanye aha na ntuli aka - Site na ntuli aka, ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla iji nweta nzaghachi site na ndị debanyere aha gị. Naanị zipu ajụjụ gị ma chere ka azịza malite ịmalite.
Obere njikọ - Zoputa ihe odide di oke onu ahia. Tụgharịa URL ndị kachasị ogologo ka ha bụrụ obere njikọ ederede - enyi na enyi. Ziga njikọ na saịtị, vidiyo, ọdịnaya enwere ike ibudata, ma ọ bụ ngwa.
Text-Kwado nọmba gị - Anata na zaghachi ozi ederede na gị ẹdude azụmahịa nọmba ekwentị na-enweghị na-emetụta ọrụ olu gị.
Ntughari nkwuputa - Site na pushma Ọkwa desktọọpụ, ị nwere ike ịnyagharịa site na SimpleTexting na-enweghị nchegbu gbasara ozi ọ bụla agbaghara!
Ebe E Si Nweta - Jiri 'em ma ọ bụ tufuo' em? Ọ bụghịkwa ọzọ! Ekele adighi ejizi ego ugbu a. Nwere ike ijigide ụgwọ gị fọdụrụnụ ruo na njedebe nke ọnwa na-esote.
Otu ederede site na ekwentị - Zipu ederede ederede nye ndị debanyere aha gị, ọbụlagodi na ịnweghị ike ịbanye na kọmputa. Naanị zitere anyị ederede na ndepụta ịchọrọ ozi ma anyị ga-akpọgara ya ndị ziri ezi.
Ndepụta Nhicha Onwe - Anyị usoro na-akpaghị aka achọpụta na ndị nwụrụ anwụ nọmba oge ọ bụla ị na-eziga a ozi na-ewepu ha mgbe ha hụrụ. Ọ dịghị mkpa ka ị nyochaa mgbe niile!
Akwụkwọ ederede ụbọchị ọmụmụ akpaghị aka - akhapụ achicha na confetti: ọ bụ oge maka ụbọchị ọmụmụ ememe. Ememme ụbọchị ọmụmụ anyị akpaghị aka na-ewe nkeji abụọ iji melite ma ọ bụ nnukwu ụzọ iji mee ka ndị debanyere aha gị obi ụtọ.
Gbalịa SimpleTexting For Free
Njikọ SMS SimpleTexting
Fọm Weebụ - Kwe ka ndị Fans gị họrọ ozi ederede gị na weebụsaịtị gị. A ngwa oyiri na mado bụ niile ọ na-ewe iji embed otu nke anyị mfe iche na saịtị gị.
Mmekọrịta Mailchimp - Enwere akaụntụ Mailchimp? Mekọrịta ya na SimpleTexting wee bido ikesa kọntaktị n'etiti nyiwe abụọ ahụ. Enweghịzi mbupụ na mbubata akwụkwọ ntuziaka!
API - Tinye texting ike gị ẹdude usoro. Iwekota na SimpleTexting site na API dị ike anyị. Ọnụ anyị ga-ewulite ngwaahịa mara mma nke SMS.
Mmekọrịta Zapier - Mmekọrịta anyị na Zapier na-enye gị ohere ịmepụta usoro akpaka site na ijikọ SimpleTexting na ngwa 1,000 + gụnyere Gmail, Facebook na ndị ọzọ.
Apps - Jikọọ SimpleTexting na ngwa weebụ ị na-eji. Were ahia gi na ọkwa ọzọ site na ịgbakwunye ozi ederede na ngwakọta.
Ngosi: Abụ m mmekọ Onyedikachi Nwachukwu na m na-eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: KeywordsmailchimpMMSmms ahiaahịa efumobile sms ngwaederede ederedeobere ozi usoroshortcodesmfeSMSsms oziSMS autoresponderssms mgbanweozi ctrsms isiokwuSMS ahịasms nkewasms ụdị weebụederede ederede ahiantuli ederede ederedeozi ederedeederede ederede apiederede iji votuederede iji merieike